UMagudulela usaba ingcindezi ekuhambeni | Isolezwe
UMagudulela usaba ingcindezi ekuhambeni
Isolezwe / 20 June 2012, 10:48am /
UNENGCINDEZI yokunqoba okokuqala phesheya kwezilwandle umpetha wakuleli we-heavyweight, uWiseman Sabalutho
Dlomo, ozobhekana noTimur Ibragimov empini yesicoco seWBA Pan African esingaphethwe muntu ngoMsombuluko.	Isithombe: PATRICK MTOLO
UNOVALO ngengcindezi abazobhekana nayo ekuhambeni umqeqeshi kaWiseman “Sabalutho” Dlomo ozoyolwa okokuqala ngaphandle kwaseNingizimu Afrika.
Bazolifulathela elakuleli namuhla balibhekise e-Ezbekistan lapho uDlomo, oyingqwele ku-SA heavyweight, eyoxhimfana khona noTimur Ibragimov empini yesicoco seWBA Pan African esingaphethwe muntu ngoJuni 25.
Yize umqeqeshi kaDlomo, uZwi Magudulela, esekhiqize ompetha ababili bakuleli, nababili baKwaZulu-Natal ezigabeni ezehlukene kodwa uzobe eqala ukuba sekhoneni lomshayisibhakela phesheya kwezilwandle futhi esibhakeleni somhlaba. Akasabulali ubuthongo ezama ukuthola iqhinga elizobasiza babhekane nezihlwele zika-Ibragimov.
“Ngilwa neqhinga lokunqoba ingcindezi esizoyithola ezihlweleni zakhona. Ngiyazi ukuthi kuzoba nzima kanjani ngoba bazobe beyeseka imbangi,” kusho uMagudulela.
Emizameni yokuthola usizo uMagudulela kuvele ukuthi usexhumane nabaqeqeshi abahlonishwayo kuleli abafana noManny Fernandez wodumo lokunqobisa uTakalani “Panther” Ndlovu ibhande le-IBF noMzimasi Mnguni osengumphathi we-Eyethu Boxing Promotions. UMzimasi wapheka iningi labashayisibhakela abaqhamuka e-East London abafana noSimphiwe “V12” Vetyeka owayengumpetha we-IBO.
“UMzi ungitshele ukuthi konke ukumemeza okwenziwa yizihlwele zembangi kufanele sikuthathe sengathi kubhekiswe kithi, sifake umfutho. Sengizamile ukumqinisa idolo uDlomo ngokufanele sikulindele futhi ubukeka ekuzwa konke,” kusho uMagudulela othembise abathandi besibhakela kuleli ukuthi isicoco bazobuya naso ukuphakamisa ifulegi laseKZN.
Ngakolunye uhlangothi, u-Ibragimov ngeke athathwe kalula yize ehlulwe ezimpini ezimbili zokugcina. Ugcine ukungena eringini ngoDisemba ehlulwa ngomcacamezelo womlalisa phansi nguSeth Mitchell wase-United States ekuhambeni. Ngo-2004 wanqoba isicoco seWBC FECARBOX ehlula uShawn Robinson wasivikela amahlandla amane lesi sicoco. Uqhubekile wanqoba ese-IBA Intercontinental neseNABA heavyweight. Ngo-2010 wehlulwe nguJean Marc Mormeck bebanga isicoco se-WBA International. Ngaphandle kwalokho, u-Ibragimov izimpi zakhe eziningi uzilwe ngaphandle kwezwe lakhe.
UDlomo uzofulathela elakuleli nje ulindwe wumsebenzi wokuvikela isicoco sakuleli nalapho kulindeleke ukuthi abhekane no-Anton Nel ngokuphoqwa yiBoxing South Africa (BSA).